Abuurka yaa halleeyey? – Kaasho Maanka
Waxaa la inoo sheegay in shaydaanku yahay cadaw xun oo xaasid ah, waxaa sidoo kale la inoo sheegay inuu yahay aabaha xumaanta habeen iyo maalinna heeganka ugu jira siduu dadka u lumin lahaa maadaama ay tahay balan uu la galay Illaahay.
Si aan uga jawaabno waydiinta sare ku xusan waa in aan jawaabta ka dhex-raadina quraanka oo ah hadalka Illaahay sida ay muslimiintu aaminsan yihiin. Sida ku cad quraanka Illaahay markuu abuuray Aadam wuxuu ku amray malaa’igta inay Aadan u sujuudan, malaa’igtu amarkaas siduu yahay bay u qaateen waxaase diidey Ibliis oo Jinka ka mid ahaa oo aanu amarkaasi quseeyn sida ay inoo sheegeyso aayaddan hoos ku xusani Ibliis Jinnka ayuu ka mid ahaa malaa’igta la amray ka mid ma ahayn (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ)1 kadib Illaahay wuxuu cirka kasoo masaafuriyey Ibliis, masaafurintiisa ka hor ibliis wuxuu Illaahay ka dalbaday inuu daayo oo aanu dilin ilaa maalinta danbe, wuxuuna ku goodiyey inuu lumin doono tafiirta kan uu ka door-biday ee Aaadam, Illaahayna waa ka aqbalay wuxuu isna ku goodiyey inuu naarta ka buuxin doono isaga waa ibliise iyo wixii raacaba ee ilma Aadan ah, laakin goobtaas Ibliis wuxuu Illaahay ku eedeeyey inuu isagu lumiyey illaahayna wax jawaab ah kama bixin, ibliis wuxuu yidhi ( قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ)2 wuxuu kaloo ibliis aayad labaad ku yiri isagoo Illaahay eedaynaya (قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ)3, labadan aayadood ibliis wuxuu adeegsanayaa ereyga (أغويتني) oo micnihiisu yahay waad lumisay ama I halaysay.
Waxaan halkaa ka garan karnaa abuurkii Aadan ka hor inuu wanaagsanaa xidhiidhka Illaahay iyo Ibliis ka dhexeeyay maadaama Ibliis oo aan malaa’igta ka mid ahayni uu joogey xadrada samaawiga ah.
Illaahay wuxuu aayad quraan ah inoogu sheegeeyaa in awoodda hallaynta iyo tan toosintuba ay isaga oo keliya u sugnaadeen welibana qofka uu doono hadeeyo kuu doonana lumiyo, Illaahay wuxuu aayad kale inoogu sheegeyaa in isagu uu shayaadiinta usoo diro gaalada si ay gaalnimada iyo xumaanta ugu dhiiri geliyaan ( أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا)4, nebigani isagoo la hadlaya dadkii Illaahay usoo diray wuxuu leeyahay taladaydu waxba idiin tari mayso hadii Illaahay dooneyo inuu idin lumiyo ( وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ)5, dhammaan aayadahani waxay inoo sheegeyaan in Illaahay yahay kan isagu wax lumiya sidoo kalena yahay kan qorsheeyey in dadku lumaan.
Sida ku cad quraanka Illaahay naarta wuxuu abuuray Aadan ka hor taasi waxay inoo caddaynaysaa in Illahay sii qorsheeyey qoladii geli lahayd naarta (Illaahay naarta wuxuu ku odhan ma buuxsantey waxay ugu jawaabi mayee ma cid kalaad haysa – يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد)6.
Hadaba haddii shaqada shaydaanku tahay inuu ina lumiyo isaga yaa lumiyey? Xaguu ka keenay awoodduu Illaahay ku diidey? Waxaa la inoo sheegay Aadan inuu Jannada kasoo saaray saw gar maaha inaan iswaydiino hadiiba Ibliis laga soo eryey cirka xaguu Jannada u maray? Xaggu ka dhaafay Illaaha wayn ee awoodda badan? Illaahay miyuu sii ogaa in Ibliis ama ciidankiisu Jannada u daba marayaan? Ibliis wuxuu diidey amar aan isaga quseyn muxuu tolow Illaahay Ibliis ku qoonsaday? Saw ma odhan karno Illaahay waa sii ogaa in Ibliis diidi doono amarkaas? Ibliis wuxuu diidey inuu Illaahay cid aan ahayn u sujuudo, ma garbaa inuu sidaa cadaab iyo masaafurin ku mutaysto? Maxaa dhici lahaa hadii Iblays yeeli lahaa amarkaas? Sharku ma jireen saw maaha? Illaahay muxuu uga aqbalay Iblays codsigiisii isagoo og inuu qaar badan oo inaga mid ah uu luminayo? Ma gar baa inaan cadaab ku mutaysano herdanka Illaahay iyo Ibliis ka dhexeeya? Ma garbaa inaan noqonno wax ay Illaahay iyo Ibliis ku loolamaan? Illaahay saw isagu Iblays ma siin awoodda uu wax ku luminayo? iblays markuu yidhi Ilaahow adaa i lumiyey muxuu Illaahay u beenin waayey?
Waxaynu nahay dulman is dulmiday innaga iyo Ibliisna waxba kuma kala duwanin, dhamaanteen waxynu ku soconaa oo fulineynaa qorshaha Illaahay, gaalka aan islaamka ahayni inuu gaaloobo waa qoraal iyo qorshe Eebbe u dejiyey abuurkiisa ka hor, inaad wax is waydiisa denbi maaha laakin inaad wax iska qaadato iskana aaminto dadkana aad ku dhibaatayso ayaa denbi wayn ah.
Suuradda Al-Kahf: 50
Suuradda Al-Hijr: 39
Suuradda Al-Araf: 16
Suuradda Maryam: 83
Suuradda Huud: 34
Suuradda Qaaf: 30
Booqashada dhagaxa madaw
Xajjku waa dalxiis ee maaha cibaado waana meel dadka lagu baadho kadibna lacagta kasoo gasha dadka muslimiinta kale ayaa lagu laaya ama dhasha boqortooyadaa ku tamashle taga.
“Waxa jira khilaaf u dhexeeya dadka diinta hinduuga aaminsan, kaas oo ku saabsan ka sareeya labada Eebbe ee kala ah (Shiva iyo Vishnu). Dooddan darteed dad badan baa u le’day, Lingapurana waxuu u balan qaadaa jannada Siva qof kastoo dila ama carabka ka gooya qof kasoo horjeeda Siva” (Klostermaier, 1994). “Dadka Zulus ka loo yaqaano dhexdooda waxa ka caana hadii gabar uur...